काठमाण्डौको मतगणना सुरु, जित्लान बालेनले ? Bizshala -
काठमाण्डौको मतगणना सुरु, जित्लान बालेनले ?
काठमाण्डौ । सर्वाधिक चासोको विषय बनेको काठमाण्डौ महानगरपालिकाको मतगणना सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय सभागृहमा केहीबेरअघिदेखि काठमाण्डौ महानगरपालिकाको मतगणना सुरु भएको हो ।
सर्वदलीय बैठकमा भएको सहमतिअनुसार काठमाण्डौको वडानम्बर १ र ३२ बाट एकैपटक मतगणना थालिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
मतगणनास्थल क्रमशः थप्दै जाने रणनीति रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
काठमाण्डौ महानगरपालिकाको सम्भावित मतपरिणामको विषयमा सर्वाधिक चासो देखिएको छ । यो क्षेत्रमा एमाले, कांग्रेसका उम्मेद्वारहरुलाई मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन साहले टक्कर दिने प्रक्षेपणहरु सार्वजनकि भइरहँदा चासो अझ बढ्दै गएको छ । केही संस्थाहरुले त बालेन नै काठमाण्डौको मेयरमा निर्वाचित हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका छन् ।
local election election result